July 2013 « A.S.M.A
၂။ဦးခန္တီ၊အသက်(၂၄)နှစ်၊(ဒုတိယ) ပုဏ္ဏားကွန်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ၊ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင် ရက္ခနွယ်ဖွား၊သာသနာ့အာဇာနည် အရှင်မြတ်များ ( တစ်နိုင်ငံလုံး)
9:07 AM Share:
(ထ) စစ်တွေ စာဖြေဌာန.......
၁။အရှင်တိလောကသာရ၊အသက်(၄၄)နှစ်၊ဘ-ဦးကံလှအောင်၊စွန်ရဲရွာ၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ မင်းဂံရွာဦးကျောင်းတိုက်၊စစ်တွေမြို့ မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၂။ဦးစန္ဒောဘာသ၊အသက်(၃၉)နှစ်၊ဘ-ဦးဦးစောဖြူ၊နတ်ချောင်းရွာဟောင်း၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ မြို့မပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊စစ်တွေမြို့မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၃။အရှင်ဂုဏသေဋ္ဌ၊အသက်(၂၄)နှစ်၊ဘ-ဦးဝင်းမောင်၊ပြင်ဝန်းရွာ၊အမ်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ သဒ္ဓမ္မဂရု(ပုသိမ်)ကျောင်းတိုက်မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၄။အရှင်ပဏ္ဍဝ၊အသက်(၂၇)နှစ်၊ဘ-ဦးစိန်ဖြူအောင်၊တောင်ပုက္ကေကျေးရွာ၊ပေါက်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ပညာမဏ္ဍိုင်စာသင်တိုက်၊စစ်တွေမြို့မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၅။အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ၊အသက်(၂၉)နှစ်၊ဘ-ဦးရွှေထွန်း၊တောင်ပုက္ကေကျေးရွာ၊ပေါက်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ပညာမဏ္ဍိုင်စာသင်တိုက်၊စစ်တွေမြို့ မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၆။ဦးက္ကန္ဒောဘာသ၊အသက်(၄၃)နှစ်၊ဘ-ဦးညွန့်စိန်ဦး၊တံတားဦးရွာ၊ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊။ သာသနရံသီကျောင်းတိုက်၊စစ်တွေမြို့မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၇။အရှင်နန္ဒ၊အသက်(၄၈)နှစ်၊ဘ-ဦးကျော်သာအောင်၊ပန်းဇင်းမော်ရွာ၊ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မဏိရတနာကျောင်းတိုက်၊စစ်တွေမြို့ မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၈။ဦးနန္ဒသာရ၊အသက်(၃၁)နှစ်၊ဘ-ဦးအေးကျော်ဖြူ၊ဖဒူချေရွာ၊ပေါက်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ရတနာမာရ်အောင်ကျောင်းတိုက်၊မြောက်ဦးမြို့ မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၉။အရှင်ဝိစက္ခဏ၊အသက်(၃၄)နှစ်၊ဘ-ဦးကျန်ထွန်းအောင်၊ပိုးရွီပြင်ရွာ၊ပုဏ္ဏားကွန်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ မြို့မကျောင်းတိုက်၊မောင်တောမြို့မှ အောင်မြင်တော်မူသည်။
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲ၊ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်းအောင် သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ (ဂုဏ်ပြုခံသာသနာ့အာဇာနည်) ရခိုင်ပြည်နယ်
( First Prize )
၁။ဦးဓမ္မဓဇ အသက် ၂၇-နှစ်၊ဘ-ဦးဝေလှစိန်၊သစ်ပုတ်ရွာ၊ပေါက်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ပထမ(အဂ္ဂမဟာအကျော်) ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်။
( Second Prize )
၂။ဦးခန္တီ၊အသက် ၂၄-နှစ်၊ ဘ-ဦးမြသာ၊ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊
( Third Prize )
၃။ဦးဥာဏာစာရ၊အသက် ၃၁-နှစ်၊ဘ -ဦးအောင်ဆန်း၊ချင်းယားရွာ၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်း။
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အဂ္ဂမဟာအကျော်နှင့် ဒု ၊တ ရရှိတော်မူကြသော အရှင်မြတ်(၃)ပါး
9:03 AM Share:
4:29 AM Share:
ဟောင်ကောင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့မှ ဘွဲ့ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို့အား ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲနှင့် မြောက်ဦးဆရာတော်ကြီး၏ အထူးတရားပွဲ
ဟောင်ကောင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့မှ ဘွဲ့ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို့အား ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲနှင့် မြောက်ဦ...
"ပညာသင်အလှူ ဂုဏ်ပြုလွှာ" ဦးပညာသာရဗောဓိ B.A., M.A (IBSC) 26. 7. 2018 A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajav...
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အဂ္ဂမဟာအကျော်နှင့် ဒု ...